दौरा सुरुवाल बहसमा प्रदेश !  Sourya Online
दौरा सुरुवाल बहसमा प्रदेश !
सौर्य अनलाइन २०७४ फागुन १ गते १०:४७ मा प्रकाशित
-चमिना भट्टराई ०६८ सालसम्म नेपालको राष्ट्रिय पोसाक दौरासुरुवाल र साडी चोलो थियो । वर्तमानका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सांसद भएका पुरूषहरू दौरासुरुवाल र महिला साडीमा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन्थे । ०४६ को परिवर्तनदेखि ०६८ सम्म पोसाकको विवाद थिएन ।
राष्ट्रिय पोसाक लगाउनु पर्छ भन्ने भावना दह्रो थियो । सके नयाँ किन्थे नभएर पुरानैमा आइरन लगाएर टलकाउँथेँ । तर, ०६८ सालमा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको पोसाक दौरासुरुवाल हटाइयो ।यसमा सम्बन्धित रहेर कैयौँले टिप्पणी गरे, ‘नेपाल पोसाकविहीन भएको छ ।’ नेपाल पोसाकविहीन हुँदा नेपाली युवा समाज सुधारक श्यामकृष्ण बजगाइँ र राजकुमार बजगाइँले ०६९ सालबाट नै नेपाल पोसाकविहीन हुनुहुन्न भन्दै ‘१७ पुसलाई प्रस्तावित नेपाली पोसाक दिवस’ मनाइरहेका छन् ।
उनीहरूले नेपालको पोसाक पुनः दौरासुरुवाल र टोपी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गदै आइरहेका छन् । वास्तवमा देशको पहिचान विरंगी भएरभन्दा एउटै पहिचामा उभिँदा सुन्दर मात्र होइन एकरूपता देखिन्छ । परिवर्तनको नाममा के के छोडने र के के समात्ने गम्भीर हुनुपर्छ । अधिकार पाउनु र त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकारात्मक कुरा हो । तर, राष्ट्रिय, पोसाक, भाषाजस्ता कुरा छोडदै गयौँ भने कता पुगिएला ? जन्मदा बाहुन, क्षत्री, वैश्य, शुद्र जे जे जाति छौँ त्यो भन्दा पनि पहिले हामी सबै नेपाली नै हौँ ।
यदि राष्ट्रियता रहेकै अवस्थामा त्यही भित्र खोज्ने हो आ–आफ्नो पहिचान । राष्ट्रिय पोसाक नै नरहँदा विश्व समुदायले नेपाललाई कसरी चिन्ने ? कुरा पोसाकको मात्र होइन, कुरा सोचाइको हो । दौरासुरुवाल नै लगाउन पर्छ भन्ने पनि होइन । तर, दौरा सुरुवालको स्थान केले लिँदै छ भन्ने हो । हामीले दौरा सुरुवाललाई विस्थापित गरेर लगाउन लागेको टाइ सुट र सफारी सुट नेपालको कुन जाति वर्ग वा समुदायलाई आफ्नो पहिचान दिएको अनुभूति हुन्छ ? परिवर्तन गर्ने नाममा चलिआएको पोसाकको स्थानमा विदेशीलाई ठाउँ दियौँ भने त्यो कत्तिको सान्दर्भीक हुन्छ त्यसमा पनि सोच्नुपर्ला ।
सोमबार (हिजो) प्रदेश–२ को निर्धारित प्रदेशसभा बैठकको तयारी चलिरहेका वेला एकाएक दौरा सुरुवाल कोट र सारी चोलो कोट लगाएर मर्यादापालक कुवा रामपुरस्थित प्रदेश संसद् भवनमा प्रवेश गरेपछि खैलाबैला मच्चियो । एउटा नेपालीले आफ्नो विवेकले दौरा सुरुवाल लगाउन पाउने कि नपाउने ? प्रश्न छ । मधेसवादी दलले सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै मर्यादापालकले दौरासुरुवाल लगाउन नपाउने उर्दी जारी गरे । त्यसपछि उनीहरू अनौपचारिक पोसाकमा ड्युटी खटिएका थिए । उनीहरूले मर्यादापालकको चिनोको रूपमा एउटा सानो ब्याच लगाइएका थियो ।
प्रदेश–२ को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सफारी सुट र सारी चोलो ड्रेसकोड तय ग¥यो । यसलाई कति उपलब्धी मान्ने ? अझ रमाइलो कुरा के पनि छ भने त्यो पोसाक तत्काल उपलब्ध हुन सक्दैन । त्यसैले मर्यादापालकहरूले आफूखुसी पोसाक लगाउन पाउने भएका छन् । नेपालको मात्र होइन विश्वका संसदीय अभ्यासमा मर्यादापालकको एउटै ड्रेस हुन्छ । उनीहरूलाई सहजै चिन्न सकियोस् भनेर पनि एकै प्रकारको पोसाकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सुरक्षाका दुष्टिले पनि संसद् भवनमा खटिने मर्यादापालकले एकै प्रकारका पोसाक लगाउँछन् ।
प्रदेश–२ मा भएको अभ्यासको भने आलोचना पनि भएको छ । कुरो प्रदेश–२ को मात्र होइन । ०६८ पछि भित्रिएको चिन्तनको हो । नेपालको राष्ट्रिय पोसाकको बहस चलिरहेको बेला युवापुस्तामा भने दौरासुरुवाल र ढाकाटोपीप्रति आकर्षण देखिएको छ । युवाहरू बिहे वा औपचारिक समारोहमा जाँदा दौरासुरुवाल, ढाका वा भादगाउँले टोपीमा देखिन थालेका छन् । पोसाक फेसन वा शरीर ढाक्नका लागि मात्र लगाइँदैन त्यसको आफ्नै विशेषता र पहिचान हुन्छ । यसमा गम्भीर हुनपर्छ ।